Meksika: Niteraka tondra-drano ny firotsahan’ny orana be loatra tany Veracruz sy Tabasco · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2010 21:16 GMT
Miaina iray amin'ireo loza voajanahary goavana indrindra nikapoka ny firenena i Meksika amin'izao fotoana izao. Ny gazety Meksikana Milenio [es] nanamarina fa tamin'ireo firenena roa niharan'ny tondra-drano, Veracruz sy Tabasco, mihoatra ny 25000 ireo olona tsy maintsy nandao ny fonenany, satria efa hirodana tsy ho ela ny fefilohan'i “Temazcal” sy “Cerro de Oro” noho ny hamafin'ny herin'ny rotsak'orana.
Nitsikera ny loza miatra amin'ireo fonenany ireo mpampiasa Twitter, tahaka an'i Marisol Montúfar (@hereismarisol), izay nanoratra [es]:
Mampitaha [es] iny zava-nitranga iny tamin'ilay horohoron-tany tany Haiti i NicteTapiaKim (@NicteTapiaKim):
Rehefa nitranga [ilay horohoron-tany] tany Haiti, tonga niaraka tamin'ny fanampiana ireo kamio, ary izao rehefa mila azy izahay aty dia tsy misy izany #veracruz#lluvias#inundacion
Araka ny Agence Fanaovan-gazetyPrensa Latina [es], mbola ratsy noho izay noeritreritina ny fatiantoka ara-ekonomika: “Ny manam-pahefana Meksikana dia nitatitra ny fahaverezana vola mitentina aman-tapitrisa noho ireo rotsak'orana mahery, ireo fokonolona 25 ao amin'ny firenen'i Veracruz dia mila 131 tapitrisa dollars fara-faha keliny hanamboarana ny fahasimban'ny fitaovana.”
Tamin'ny herinandro lasa teo, mba hampiseho ny firaisankinany noho ny faneren'ny olona be fangatahana, nandeha tany Tlacotalpan, Veracruz ny Filoha Felipe Calderón izay nahatratra iray kilometatra manodidina ny rano sy ireo arabe tondraka. Araka ny voalazan'ny El Universal [es], nahatratra teo amin'ny 1 ka hatramin'ny 1.5 metatra teo ny ahavon'ny rano.
Ao amin'ny Twitter, nahatonga ady hevitra ny fitsidihan'i Caderon. Mampahafantatra [es] i Manuel (@mdgo80):
Misalasala ny sasany amin'ireo mpampiasa, satria mino izy ireo fa raha niseho i Calderón dia ho an'ny gazety fa tsy hampiseho ny firaisan-kinany amin'ny fandehanana tany amin'ireo arabe tondraka. Nanoratra [es] i Mario Vázquez (@MMarioVazquez):
Nefa i Pachicle (@Pachicle) kosa dia manana fibanjinana hafa [es]:
Mampahitsy ny hazakazakany i Calderon, nisambotra ny “The Barbie” izy ary nankany amin'ireo arabe tondraky nyrano tany Veracruz. Tsy te-hanary ny fitondrany izy